Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny Janoary 2012
Mey 2020 34 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny Janoary, 2012
29 Janoary 2012
Iran: Mihamafy Ny Sazy, Ary Mitotongana Ny Lanjan'ny Vola Iraniana
Miatrika safodrano ara-toekarena ireo Iraniana satria very lanja isanandro ny vola nasionaly (Rial) noho ny fahamafisan'ireo sazy mihatra amin'ny solika Iraniana sy ny rafitra ara-bola.
Hitsidika firenena irery mandritra ny herintaona ilay mpanao gazety amin'ny alàlan'ny Lahatsary Maggie Padlewska, hitety firenena iray isan-kerinandro ary mitontaly 52 ireo firenena hotsidihany amin'izany. Mandritra ny fitsidihany dia haka ary hamokatra lahatsarin'ny fifandraisany amin'ireo vondrom-piarahamonina, fikambanana ary olona zara raha voaresaky ny mpampita vaovao izy, ary hamoaka izany ao...
28 Janoary 2012
Mpanoratra Thiana Biondo · Amerika Latina
Ny Fetiben'i Salvador [karnavalina], ao Brezila, no iray amin'ny lehibe indrindra manerantany. Leon'ny resaka ara-barotra tafahoatra sy ny fanovana ny kianjam-bahoaka lasa an'olotsotra vonjimaika kosa ny mponina ao an-tanàna. Nidina an-dalambe ry zareo tamin'ny 14 janoary rehefa nifanentana sy nifandamina tamin'ny alalan'ny Facebook sy Twitter mitaky ny hanalana ny fanorenan'ireo...
Mpanoratra Onnik Krikorian · Afrika Mainty
Mpanoratra Ali Alhasani · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Ela ny ela tonga ao Jordania ihany rehefa ela niandrasana ilay vahiny fotsy, rehefa nandalo indroa ny hatsiaka maina dia tonga izy saingy nitsonika vetivety. Mbola tsy niangona akory dia efa nitondra hafaliana sy haravoana ho an'ireo niandry azy. Vantany vao nirotsaka tany amin'ny faritra be tendrombohitr'i Jordania ny ranomandry...
Nankatoavin'ny antenimiera ihany omaly ny lalàna manome alalana an'i Ali Abdullah Saleh tsy ho azo samborina sy gadraina famelan-tsazy tanteraka ho an'ny filohan'i Yemen teo aloha Ali Abdullah Saleh rehefa nahemotra in-dimy miantoana ny adihevitra mikasika izany. Tsimatimanota i Saleh araka izany lalàna izany tamin'ireo heloka vitany nandritra ny fitondrany, tafiditra...
27 Janoary 2012
Tao Gresy, ny 6 Janoary dia androm-pirenena fankalazàna ny Theophany. Isan-taona, ny governemanta sy ireo mpiasam-bahoaka dia mandray anjara amin'ilay fankalazàna, ka aorian'izany no ananan'izy ireo fotoana hanaovana fanambaràna amin'ny fomba ofisialy. Kanefa, noho ny fahasahirànana ara-toekarena, politika ary sosialy lalovan'i Gresy, ny fankalazàna tamin'ity taona ity dia voamariky ny...
Malezia: Manome Tsiny Ny Google Translate Ny Minisitra Noho Ny Hadisoana Hita Ao Anatin'ny Vohikala
Aza mitafy “akanjo manaitra ny maso” ary tadidio ny fanamiana fitondra amin'ny “adin'ny Mongoose” amin'ireo lanonana ofisialy. Ampahany amin'ireo hadisoana mahatsikaiky amin'ny dikanteny Anglisy tany anatin'ny vohikalan'ny Minisiteran'ny Fiarovana any Malezia ireo voalaza ireo, izay laha lohateny vaventy tamin'ny herinandro lasa teo. Efa noesorina ireo hadisoana ireo nefa tsy talohan'ny...